ဘယ် usb အမျိုးအစားကိုသုံးကြမလဲ??????? — MYSTERY ZILLION
ဘယ် usb အမျိုးအစားကိုသုံးကြမလဲ???????
January 2009 edited October 2009 in Other
အခုဆိုရင် စျေးကွက်ထဲကို အမျိုးမျိုးသော USB drive တွေ ၀င်လာပါတယ်။ 4G ကို 10,000 ပဲရှိတော့တဲ့အထိ စျေးတွေပြုတ်ကျတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က consiar 4G တစ်ချောင်းကို ကျွန်တော်၀ယ်တာ 37,000 ပေးရရာက အခု စျေးကွက်ထဲရှိ ခပ်ပေါပေါ စတစ်တွေဆို 8G မှ10000သာသာပဲရှိတော့တယ်။ စျေးနှုန်းကျဆင်းတာနဲ့ အမျှ ကွာလတီတွေလဲ :14:ကျဆင်းလာပါတယ်။ အရင်က ဟာတွေက သုံးလို့ကောင်းသလောက် အခုပေါပေါနဲ့ ၀ယ်ထားတာတွေက ပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးတက်ပါ:14:တယ်။ format ချမရတာတို့ ဖိုင်ထည့်ရင် error တက်တာတို့ နဲ့ (တော်တော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းအောင်ကို လုပ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မန်ဇက်က မန််ဘာတွေအနေနဲ့ ဘယ်လို စတစ်တွေကိုသုံးနေကြတယ်။ :5:ကိုယ်သုံးနေတဲ့ စတစ်က ဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိတယ်။ ဘယ်လိုအားနည်းချက်တွေရှိတယ:2:် ဘယ်လို အမျိုးအစားကို၀ယ်သုံးသင့်တယ် \_:D/စသည်ဖြင့် နောင်မှာ၀ယ်သုံးမယ့်သူတွေကို အကြံပေးစေချင်ပါတယ်။ ဒါမှ ၀ယ်ပြီးကာမှနောင်တရ:((တဲ့ အဖြစ်မျိုးနဲ့ကင်းေ၀းရမှာပါ။ :68:
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အခု စတစ်နောက်တစ်ခု၀ယ်ချင်ပေမယ့် ဘာ၀ယ်ရမလဲမသိဖြစ်နေပါတယ်။ ဟိုတစ်နေ့က citicom မှာစုံစမ်းတာတော့ 8G bootable စတစ် တစ်ချောင်းကို 24,000တဲ့။ ၀ယ်သင့်မ၀ယ်သင့်ပြောကြပါဦး။ :39::101:
လောလောဆယ်တော့ Consiar 4G ကိုသုံးနေပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကဂျီကဂျောင်ကျခြင်းမရှိပါဘူး။ စိတ်တိုင်းကျရတဲ့ စတစ်လေးတစ်ချောင်းပါ။:):103:
ကောင်းတာကိုပြောရရင်တော့ Sandisk ကိုသုံးပါ... တော်တော်မာပါတယ်.. ကျနော် အခု လက်ရှိ 8GB ကိုသုံးနေပါတယ်.. ။ကျနော်ဆို ဘယ်တော့မှ Safety Remove မလုပ်ပါ..။
ဒီအတိုင်း ဆွဲြုဖုတ်လိုက်တာပဲ.. သူ့ဟာသူ ဘာဖြစ်ကျန်ခဲ့ကျန်ခဲ့
အခုနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့၀င်လာတဲ့ stick တွေက China Made တွေ ဖြစ်သောကြောင့် စျေးလည်းချို Quality လည်း မကောင်းပါ...။
ပိုက်ပိုက်မတတ်နိုင်ဘူးလေကွယ်။ ဒီလိုတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ China made ထဲက ကောင်းကောင်းအရှိဘူးလား။
တရုတ်ပစ္စည်း၀ယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကံလို့ပဲမှတ်ရမှာပဲ။ တစ်ချို့ဆို အကြာကြီးခံတယ်။ တချို့ကတော့ ခဏလေးနဲ့ ပျက်သွားတတ်ကြတယ် ဘယ်ဟာကတော့ဖြင့် အကောင်းဆုံးရယ်လို့ ပြောဖို့ခက်မယ်ထင်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်ကတော့ Kingston အကြည်လေး ၂ ချောင်းကို သုံးနေပါတယ်။ ၂ ချောင်းစလုံး2GB ပါပဲ။ ၁ ချောင်းကတော့ ၁ နှစ်လောက်ရှိပြီး ပျက်တော့ မပျက်သေးဘူး။ ကျွန်တော်က backup အနေနဲ့ သုံးတာဆိုတော့ access လုပ်တာနည်းလို့နဲ့ တူပါတယ်။ အခုနောက်တစ်ချောင်း ကိုတော့ daily used အတွက် ၀ယ်ထားပါတယ်။ သုံးတာ
Toshiba တွေကောင်းပါတယ် Bro.
တခြား ချိနမိတ် ( China made ) တွေထက်စာရင်စျေးနဲနဲပဲပိုကြီးတာပါ။ ဒါပေမဲ့ သုံးရတာမာတယ်။ ပုံစံလှလှကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက်ဆိုလဲ Design လေးတွေက လှပါတယ်။
ကျနော်က ကိုယ်တိုင်လဲ Thshiba ပဲသုံးတယ်။ သူများတွေမှာလို့ ၀ယ်ပေးရရင်လဲ Toshiba ပဲရှာ၀ယ်ပေးလိုက်တာပဲ။
*** Kingston တွေတော့ ကျနော်လုံး၀မကြိုက်ပါ။ Kingston အပျက်လေးတွေ ကျနော့် Office မှာ အများကြီးရှိတယ်။
Sandisk ကောင်းပါတယ်။ ပျက်ခဲပါတယ်။ ကျနော် သုံးနေတာကြာပြီ။ ပျက်သေးဘူး။:D
စျေးချိုတဲ့ဟာ ဝယ်ပြီး ခဏခဏပျက်လို့ ပြန်ဝယ်မလား။ စျေးကြီးတဲ့ဟာ ဝယ်ပြီး ပျက်ခဲတဲ့ဟာ ဝယ်မလား စဉ်းစားပေါ့။:)
ပို်က်ပို်က်မရှိရင် ကျနော် ၀ယ်ခဲ့မယ်လေ
မှာကြည့်ကြည့်ပါ... တစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းတော့ ၀ယ်လာလို့ရပါတယ်...
8 G လောက်မရှိဘူးလား။ မြန်မာငွေဘယ်လောက်ကျလဲ။ စိတ်၀င်စားတယ်။ ipod လေးပါစုံစမ်းပေး။ :P
design ဆန်းဆန်းလေးတွေကို ဘန်းကျော်ကဘယ်နေရာမှာ ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတာကော သိကြပါသလားခင်ဗျား:106:
(ကောင်မလေးကို လက်ဆောင်ပေးလို့ ကောင်းမယ့်ပုံမျိုးပါ:D)
In taiwan,u can buy 16GB sandisk USB drive which cost only 30000 kyats.
if u can wait,u should wait3months.
i think u can buy that disk in myanmar after3months.
ဟုတ်တယ် toshiba ကောင်းတယ် ခဏခဏပြုတ်ကျတာတောင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး ..2G ကို ၁၈၀၀၀ ပေးခဲ့ရတယ်
iPod Classic 120G ကို စလုံးငွေ ၅၀၀ ပေးရတယ်ဗျ.. International warranty 1 year ပေးတယ်..
စလုံးငွေ 500 ဆို မြန်မာငွေဘယ်လောက်ရှိလဲဟင်။
Citicom တို့ Technoland တို့မှာသွားကြည့်ပါလား။ Citicom ဆိုရင် stick နဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်ချရသလောက်ရှိတယ်။
After3month, it will reach myanmar sure? Sure so yin wait mal.
made in China ဖြစ်သောကြောင့် qualityမကောင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘန်းကျော်ကုန်သည်များ၏ အတ္တ ကြောင့် quality ညံ့နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်းကျော်ကုန်သည်များက တရုတ်ပြည်က စက်ရုံကို ပစည်းမှာရင် ဘယ်လောက်တန်ထုတ်ပေးဆိုပြီး မှာလိုက်တာပါ။ စက်ရုံတွေက သူတို့မှာတဲ့ပုံစံအတိုင်း ထုတ်ပေးပါတယ်။ မယုံရင် အနီးစပ်ဆုံး Thai ကိုရောက်ရင် အဲဒီက တရုတ်ပစည်းတွေ ဝယ်သုံးကြည့်ပါ။ စျေးလဲချို ကောင်းလဲကောင်းတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ China made တွေကတကဘာလုံးသွားနေတာပါ။ အမေရိကတို့ England တို့မှာလဲရှိတာပဲ။ သူတို့နိုင်ငံမှာလဲ သုံးနေကြပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဘန်းကျော်ကုန်သည်တွေက ချွတ်ယွင်းချက်ရှိတဲ့ ပစည်းကို စျေးပေါပေါနဲ့ဝယ်လာပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံသားအချင်းချင်း ပြန်ဒုတ်ခပေးနေကြတာပါ။ ဒါကြောင့် ပစည်းဝယ်ရင် warranty အမှန်တကယ်ပေးတဲ့ဆိုင်မှာရွေးဝယ်ပါ။ စျေးနှုန်းနဲ့ made in ဘာညာဆိုတာ အဓိက မကျပါဘူး။ အဓိကကျတာ ကိုယ်ဝယ်မဲ့ဆိုင်ပါ။
ဘယ် ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ် အကြမ်းကိုင်ရင် ကတော့ သက်တမ်းတိုမှာ ချည်းပါပဲ
လုလု ဆီမှာတော့ kingston 1GB ဆိုကြာလှပြီ2နှစ်လောက် ရှိပြီ...အကောင်းကြီးပဲ
တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ဆိုင်ရွေး၀ယ်ဖို့တော့လိုမယ် wrannty ပေးတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ရင်ကောင်းတာပေါ့
အမျိုးစားချင်းတူတူ ခုနကလို special demand ပေးတဲ့ stick တွေဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာလေ သိဘူး:O
နောက်ထပ်၀ယ်ထားတဲ့ Toshiba 4GB ကလည်း အသုံးခံပါတယ် သိပ်မကြာသေးလို့ သုံးကြည့်တုန်း
15000 ပဲ ပေးရပါတယ်:D
ဂုရုကြီး ပြောသလိုပါပဲ ... အခုဆိုရင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဘယ်အမျိုးအစားကိုပဲကြည့်ကြည့် Made in China တွေပဲ ဖြစ်နေပါတယ် ... ဒါပေမယ့် Quality ကတော့ တော်တော်လေးကွာပါတယ် ... အင်္ဂလန်က Made in China နဲ့ မြန်မာပြည်က Made in China ပစ္စည်းချင်း (အစစ အရာရာ တစ်ပုံစံတည်း) တူတာတောင် အထဲက Quality ကတော့ လုံး၀ ကွဲပြားသွားပါတယ် .. ထုတ်တဲ့သူတွေကလည်း ထုတ်ကတည်းက ဘယ်နိုင်ငံအတွက် ဘယ်လောက် Quality ထုတ်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပြီးတော့ကို ထုတ်တာပါ ... အဲဒီအတွက် စဉ်းတော့ စဉ်းစားကြပေါ့နော် ...
သိသလောက်လေး ၀င်ပြောတာပါ .. ဒါပေမယ့် ..
တရုတ်ပစ္စည်းဆိုလို့ တရုတ်မလေးတွေပဲ ကောင်းတယ်ပြောတယ် ... ဒါပေမယ့် ၂၀ ကျော်ရင် မကောင်းတော့ဘူးတဲ့ ... ဘာတွေပြောမိနေလဲ မသိတော့ပါဘူး ... :D:D
ကျွန်တော်ကတော့ အခုလက်ရှိ SONY Microvalut 4G ကိုသုံးနေပါတယ်... စင်္ကာပူမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အကိုကြီးတစ်ယောက်က ၀ယ်ပေးထားတာပါ.. သုံးရတာတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်... သူ၀ယ်ပေးတုန်းက sin $ 23 ပဲပေးရပါတယ်...
ကျွန်််တော်ကတော့ kingston တစ်ခုတည်းကိုပဲဲသုံးဖူးတယ် အဝတ်လျှော်စက်ထဲတောင်ရောက်သွားတယ်
ကံကောင်းလို ့ဘာမှမဖြစ်ဘူး scandisk တို ့u3 တို ့ကတော့ mini OS ပါပါမယ်ထင်တယ်
Right, most in Sandisk stick, U3 OS is already installed.. You can use portable U3 softwares like firefox, foxit reader, avast antivirus,...... etc.
If you want to know more. www.u3.com
made in china ဖြစ်သောကြောင့် qualityမကောင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘန်းကျော်ကုန်သည်များ၏ အတ္တ ကြောင့် quality ညံ့နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုအိုင်းအဆိုကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံကြောင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့လည်း လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ လက်လီလက်ကားရောင်းတာကြောင့် ထိုအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပါသည်။ ပြည်တွင်းစျေးကွက်ပျက်အောင်လုပ်နေခြင်းများအပေါ် ကျွန်တော်လည်းအမြင်မကြည်တာ အမှန်ပါ။ စျေးလျော့သော်လည်း ကွာလတီမကောင်းက အလကားပင်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်ကတော့ M-1 Stick 2GB ( Write Protect ) Function ပါတဲ့ဟာ ကြိုက်တယ်။
သုံးနေတာ အကြမ်းပတမ်းဘဲ၊ ၁ နှစ် နဲ့၈ လရှိသွားပြီး ၀ယ်တုံးက ၂၃၀၀၀ ကျပ်ပေးရတယ်။
ကံအကောင်းမလှလို ့ပြီးခဲ့တဲ့ Sunday ကဘဲ ပဲခူးသွားတုန်းပျောက်သွားတယ်။
( Write Protect ) Function ပါတာကို ကြိုက်လို ့။ ခုတော့ စျေးကွက်မှာ မတွေ ့ဘူး။
Corsair ကတော့ကောင်းပါတယ် Shock Protect ပါတော့ Computer Front Pannel တွေမှာ စိတ်ချလက်ချ တပ်လို ့ရတာပေါ့။ အနော်ကတော့ ( Write Protect ) ပါတာလိုချင်တယ် Virus ရန် ကြောက်လို ့၊ တွေ ့ရင်အကြောင်းလေးပြန်ပါဦးနော် ... ဒီ့ထက်ကောင်းတာရှိလည်းပြောပေါ့။ :77:
write protect ပါတာက ဟိုအရင်ဟာတွေမှာပဲ ပါတာခင်ဗျ။ ကျွန်တော်ပျောက်သွားတဲ့ twinmos လေးဆိုသုံးလို့သိပ်ကောင်းပေါ့။
ဒါပေမယ့် အခုဟာတွေမှာတော့ မပါတော့ဘူး။ consiar မှာ shock protect ပါတာကျွန်တော်တောင်မသိဘူးဗျ။ ဘာပဲပြောပြော အဲဒီ စတစ်လေးကတော့ အကြမ်းခံပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆို အိမ်က ကွန်ပျူတာမှာ သုံးနာရီလောက်တစ်ခါတည်းထိုးထားပြီး သုံးတာပဲ။ ပြီးတော့ အဲဒါ front pannel မှာသုံးတာနော်။ ဒါကြောင့် ပူခြင်းပျက်ခြင်းမရှိသော consiar ကို တော်တော်လေးတောင်ခိုက်သွားပြီ။ write protect ပါတာလေးတွေ့ရင် ကျွန်တော့်် ဆီ pm လေးပို့ပေးနော်။
I use mp3 player which use AAA battery before2years ago its very tough.I use it as flash drive.It needs no cable.It hold switch can be use as write protect switch.It is in good condition till today.Now I use Transcend 4gb.Its also good.
I only used Kinston and it is good to use so far.
Quility may only depand on your luck .
sandisk က ဒီလောက်တောင်မာလားဗျ safety remove မလုပ်ပဲဖြုတ်နေကျလားဗျ
ကျွန်တော့်ရဲ့ stick လေးလည်းပျောက်သွားပြီဗျ ကျွန်တော်လည်းဒီတစ်ခါဝယ်ရင် sandisk ပဲဝယ်မယ်
ဒါပေမဲ့ စျေလေးလည်းတစ်ချက်လောက် share ပေးပါ ကိုပြုံးရာ နော် :77::77:ကျွန်တော်ကဝယ်မှဝယ်အနည်းဆုံး 2Gb or 4Gb ဝယ်မှာဗျ
စျေးသက်သာတာ ၀ယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုဘဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Quality ကောင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပေးရမှာပေါ့။
ကျွန်တော် ပိုစ့်မတင်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ အမ်ဇက်ကို တစ်ခါတစ်လေတော့ ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ login သာမ၀င်ဖြစ်တာပါ။ အကြာကြီးမဖတ်နိုင်တော့ ပိုစ့်အသစ်တွေ လွတ်ကုန်မှာ စိုးလို့ပါ။ အခု safety remove အကြောင်းလေး နည်းနည်းရေးလိုက်ဦးမယ်။
ပထမဦးဆုံး USB Stick လေးထည့်လိုက်ပါ။
My Computer ကို Right Click ပြီး Manage ကိုရွေးပါ။
System Tools အောက်က Device Manager ကိုရွေးပါ။
Disk Drives >> USB Flash.... ကို Double Click ပါ။
Policies Tab ကို သွားပါ။
ရွေးစရာ နှစ်ခုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ပထမတစ်ခုကို ရွေးထားရင်တော့ Safety Remove မလုပ်လဲ ပြဿနာမရှိပါ။ ဒုတိယ တစ်ခုကိုရွေးထားမှ Safety Remove လိုမှာပါ။ ဒါဆို ပထမတစ်ခုပဲ ရွေးတော့မှာပေါ့ဆိုရင်တော့ ဒုတိယတစ်ခုမှာ အားသာချက်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Stick ကို NTFS နဲ့ Format ချလို့ရတာပါပဲ။
ပုံတွေဘာတွေနဲ့ အသေးစိတ် မရေးနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ မှားနေရင်လဲ ပြောကြပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီဟာက ကျွန်တော် တောင်ကလိ မြောက်ကလိနဲ့ တွေ့ထားတဲ့အထဲက ကျွန်တော့်ဘာသာ ယူဆထားတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုပါ။ ဒါကိုသိပြီးကတည်းက ကျွန်တော့် Stick ကို ဘာ Safety Remove မှမလုပ်ပဲနဲ့ ဒီအတိုင်းဆွဲ ဖြုတ်လာတာ အခုထိ ဘာမှ မဖြစ်သေးပါဘူး။( စမ်းသပ်နေတာ။ ပျက်သွားရင် ပြောပြမယ်။ ) ကျွန်တော့် Stick ကတော့ China Made Kingstan ပါ။
4G >> တစ်သောင်းလေးထောင် //[email protected]
ကျွန်တော်လည်းဒီတစ်ခါဝယ်ရင် sandisk ပဲဝယ်မယ်
ဒါပေမဲ့ စျေလေးလည်းတစ်ချက်လောက် share ပေးပါ ကိုပြုံးရာ နော်
ဘာမှမပူနဲ့ အီမိုလေးရေ။ မင်းကို ပြုံးဆီမှာ 4g စတစ်တွေအများကြီးပါလာတယ်။ အလကားတောင်းလိုက်ပေါ့။ :d
ကျွန်တော်ကတော့ Sandisk 4G, U3 function ပါတာလေးကို သုံးတာတော်တော်ကြာပါပြီ။ U3 function ပါတဲ့ အတွက် ကိုယ်အမြဲ သုံးလေ့ရှိတဲ့ Software လေးတွေအများကြီး တင်ထားလို့ ရပါတယ်။ အိမ်မှာ အင်တာနက်မရှိရင်လည်း Mozilla Thunderbird နဲ့ အေးအေးဆေးဆေး မေးတွေစစ်တာတို့ ကြိုရေးထားတာတို့ လုပ်လို့ရတဲ့ အတွက် အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ် ခင်ဗျာ.......
ကျွန်တော်ကတော့....ဒီတစ်လအတွင်းကို stick နှစ်ချောင်းရှိပါပြီ
တစ်ချောင်းကတော့ detect သိပါသေးတယ်..
ကမဿဘာကြီးတောင် Made In China ကြီးလားမသိဘူး:D။ ဟိုနေရာပျက် ဒီနေရာပျက်နဲ့လေ။
ကျွန်တောှကတော့ kingston ပဲသုံးပါတယ်။ နှစ်ချောင်းရှိတာ တစ်ခုကအစစ် တစ်ခုကအင်။ အစစ်က 2G ဝယ်တာ သုံးနှစ်၊ အတုက 8G ဝယ်တာ နှစ်နှစ်။ ကွန်ပျူတာဖွင့်တိုင်း စိုက်ထားတာပါပဲ၊ တစ်ခုမှမပျက်သေးဘူး။ ကျွန်တောှကြုံဖူးတာက အစစ်တွေဆိုရင် hardware tab အောက်မှာ နာမည်အတိအကျပေါှတယ်။ kingston အစစ်ဆိုရင် kingston models လို့ပေါှတယ်။ အင်ဆိုရင် CBM တို့လိုမဆိုင်တာပဲပေါှတယ်။
Warning ! ADVERTISEMENT
I want to sell my ipod nano 8 Gb.I bought it six months ago,and it will containaleather case,adock connector, an earphone , it's plastic container.Addtional contents include many rock,metal albums and music videos.You can see it under this tread http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?goto=newpost&t=5495 If you are interested,price can be negotiable.
ကျွန်တော့်Toshiba 4GB လေးတော့မကောင်းပါ ၀ယ်ပြီး 1 ပတ်လောက်ပဲ ကြာပါတယ် Bye Bye လုပ်သွားပါတယ်